सुष्मा कार्की र पूजा शर्माको लफडा, कस्को पक्षमा को ? यस्तो छ फ्यानको प्रतिक्रिया (भिडियो सहित) - Enepalese.com
सुष्मा कार्की र पूजा शर्माको लफडा, कस्को पक्षमा को ? यस्तो छ फ्यानको प्रतिक्रिया (भिडियो सहित)
इनेप्लिज २०७७ वैशाख ११ गते २१:१३ मा प्रकाशित
ईटहरी/ नेपालि सिने नगरीमा कलाकारहरुको विभिन्न गसिपहरु बेला बखत बाहिरिरहेको हुन्छ । कहिले आफ्नै ड्रेसअपले होस् त घुमघामका बेलाको तस्वीरले होस् । वा भनौ प्रेमीप्रेमिका बिच पोखिएका आवेगवाला तस्वीरले होस् । चर्चा र आलोचना भैरहेको हुन्छ । यस्तैमा एक अर्का बिचको रिसका कारण पनि चर्चा कहिले काही हुन्छ । तर खासै ठुलो रुप लिरहेको हुदैन । तर यो पटक भने रिसको ज्वाला मज्जैले दन्केको छ । कुरा हो सुष्मा कार्की र पुजा शर्मा बिचको । करिव २ वर्ष अघि सार्बजनिक भएको एक अन्तरबार्ताको क्लिपहरुका कारण यतिबेला यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको देख्न सकिन्छ । हेर्नुस के भन्छन यी २ का फ्यानहरु ?
यद्धपि यी २ को सम्बन्धमा फाटो आएको पनि सो अन्तरबार्ता अगाडि देखि नै हो । यतिबेला सम्बन्धमा झनै चिसो पाना देखिएको छ भने एकको जवाफ अर्कोले फर्काउने कार्य चलिरहेको छ । भर्खरैको एक अन्तरबार्तामा नायीका शुष्मा कार्कीले नायक आकाश र पुजालाई फ्यानका नाममा आफै सामाजिक सञ्जाल चलाउने र त्यसमा आफ्नो प्रशंसा आफै गर्ने गरेको दावी गरेकी थिइन् । साथै सोही पेजवाट आफुलाई नकारात्मक टिप्पणी समेत गरिएको उनको दावी थियो । सुष्माले आफूलाई बदनाम गर्न र कलाकारसँग आफ्नो सम्बन्ध बिगार्न केही मानिसहरू लागिपरेको पनि टिप्पणी गरेकी छन् ।